RESIDENCY LEGAL BY INVESTMENT ho an'ny UK | 100% RATE FAHOMBIAZANA | AZO ATAO | VISA GOLDEN ho an'ny UK, Fifindra-monina ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'ny toeram-ponenan'i UK amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola UK, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola UK, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola UK, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'ny UK sy Golden Visa
Manome tolotra fifindra-monina ara-toekarena any UK izahay:
● Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK
● Zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any UK
● Visa volamena any UK
● Pasipaoro faharoa avy any UK
● Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i UK amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny trano sy tany
Best Agents ho an'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK ary Mpisolovava an'ny Ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK sy ny brokers ho an'ny trano sy trano fonenana fandaharana ao UK miasa miaraka amin'ny fiarovana ny mpanjifa.
Ny toeram-ponenan'ireo masoivohon'ny fampiasam-bola ho an'ny UK dia manome serivisy ho an'ny honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, fandaharana momba ny fampiasam-bola any UK, fandaharana momba ny fampiasam-bola any UK, fonenana faharoa ampiasain'ny fampiasam-bola any UK, toeram-ponenana roa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, zom-pirenena ary toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK , Fonenana maharitra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, Resident vonjimaika amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, Resident amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any UK, Residence amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any UK, Citizenship amin'ny fampiasam-bola any UK, Citizenship amin'ny programa fampiasam-bola any UK, Citizenship amin'ny programa fampiasam-bola any UK, faharoa Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, ny zom-pirenena roa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, ny toeram-ponenana ary ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, ny toeram-ponenana ary ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, ny programa zom-pirenena momba ny zom-pirenena any UK, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any UK, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any UK, faharoa pasipaoro any Angletera, programa pasipaoro faharoa any UK, programa pasipaoro faharoa any UK, pasipaoro faharoa indroa any UK, fonenana ary pasipaoro faharoa i n UK, pasipaoro diplomatika faharoa any UK, pasipaoro faharoa amin'ny fampiasam-bola any UK, pasipaoro fizarana faharoa any UK, drafitra pasipaoro faharoa any UK, drafitra pasipaoro faharoa any UK, visa volamena any UK, visa volamena any UK, programa visa volamena any UK, programa visa volamena any UK, visa volamena faharoa any UK, programa visa volamena faharoa any UK, visa volamena roa any UK, zom-pirenena ary visa volamena any UK, visa sy visa volamena any UK, zom-pirenena visa volamena any UK, drafitra visa volamena any UK , drafitra visa volamena any UK.
"Vahaolana 1 fijanonana" ho an'ny Residence rehetra misy anao amin'ny fampiasam-bola any UK miaraka amin'ny fanampiana fanampiny.
Fampiasam-bola farafahakeliny any Angletera amin'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola: GBP 50,000
Fampidirana UK sy toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola
Mianara bebe kokoa momba ny UK
Ny Fanjakana Mitambatra, ahitana an'i Great Britain (Angletera, Wales, Scotland) ary Irlandy Avaratra, dia avo roa heny noho ny fanjakan'ny New York. Angletera, any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Nosy Britanika, dia tafasaraka amin'i Ekosy any avaratra amin'ny alàlan'ny vato Cheviot Hills; Avy amin'izy ireo ny faribon'i Pennine any amin'ny faritra atsinanana dia manitatra mianatsimo hatrany afovoan'i Angletera, tonga amin'ny toerana avo indrindra ao amin'ny Lake District any avaratra andrefana. Manakaiky ny andrefana manaraka ny moron'ny Wales - toerana iray fantatra amin'ny hantsana sy lohasaha mideza - dia ny Tendrombohitra Cambrian, raha ny Cotswolds, faritra iray amin'ny tehezan-tendrombohitra any Gloucestershire, dia manakaiky ny faribolana.
Ny làlambe manandanja mankamin'ny Ranomasina Avaratra dia ny Thames, Humber, Tees, ary Tyne. Any andrefana no misy an'i Severn sy Wye, izay tafiditra ao amin'ny Channel Bristol ary azo zahana, mitovy amin'ny Mersey sy Ribble.
Ny fahazoana ny firenena miavaka, ny faritra, ny olona ary ny fomba fiainany dia mety maharitra mandritra ny fiainana iray manontolo. Na izany aza, misy zavatra ilaina sasany tokony ho fantatry ny ex-pat alohan'ny handraisany ilay hetsika.
Fanjakana iray, firenena maro
Ny UK dia misy firenena efatra: Angletera, Ekosy, Wales ary Irlandy Avaratra. Samy manana ny kolontsain'izy ireo sy ny toetrany avy izy ireo, izay azo antoka azo antoka avy amin'ny olona eo an-toerana.
Ny distrika sy vondrom-piarahamonina an-tanàn-dehibe isan-karazany ao amin'ny firenena dia samy manana ny toetrany manokana. Voalaza matetika fa ny olona avy any avaratr'i Angletera dia mahitsy sy mahitsy kokoa noho ireo avy any atsimo, ohatra. Na dia mendrika ny hahitanao an'izany olona malaza izany aza ianao dia hiankina indrindra amin'ireo olona mifanena aminao!
Firenena manana kolontsaina marobe i Angletera ary amin'ny alalàn'ny faharesen-dahatra rehetra amin'ny fiaraha-monina rehetra. Tsy ara-dalàna ny fanavakavahana miankina amin'ny firazanana, ara-nofo, ara-nofo, na taona, na tsy fahafaha-manao. Mpivahiny marobe no voasintona any Angletera noho io karazany io, amin'ny fiheverana fa toerana manintona sy mahafinaritra hipetrahana.
Fahatakarana ny brita
Na izany aza tsy mitovy ny havany, misy ny toetra mampiavaka nozarain'ny ankamaroan'ny Brits. Deraina noho ny fitazonana azy ireo izy ireo, tsy mirona amin'ny fampisehoana fahatsapana tena tsara ary mendrika ny fiarovana azy ireo. Izany dia mety hitarika olona vitsivitsy taloha hahatsapa fa "mangatsiaka" izy ireo - na koa mandoka - hatramin'ny voalohany. Na dia mety mametra ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fiara misokatra aza izany dia ho hitanao tsy ho ela fa i Brits dia mety ho mafana sy mahaliana toy ny olon-kafa rehetra.
Raha ny marina, ny hatsikana dia tsy maintsy hitranga amin'ny Brits - indrindra fa ny fahafaha-misintona tena! Na izany aza, aza afangaro ny korontana ataon'izy ireo amin'ny tsy fisian'ny tahotra. Amin'ny ankapobeny dia manome lanja ny fiheverana sy ny fahazarana lehibe izy ireo, ary heverina ho “fitondran-tena tsy mendrika” izany.
Maro ny ex-pats mahita fa tsy maintsy mamantatra ny fomba hamantarana ny tena tantara izy rehefa miresaka amin'i Brits. Ny sasany maniry ny hanome fanehoan-kevitra tsy mazava noho ny loza mitatao amin'ny fanafintohinana - noho izany dia mety mila mihaino tsara ianao mba hahitana ny hevitr'izy ireo. Angamba izany no antony itiavan'i Brits be loatra ny mpanadala - indrindra fa raha ny toe-tany no jerena!
Miresaka ny toetrandro
Na dia nalaza noho ny tsy fahamendrehana sy ny fahamendrehana ary ny hatsiaka aza izy dia tena vanim-potoana niavaka tokoa ny UK ary ny toetr'andro marobe. Ny ririnina lava sy mangatsiaka amin'ny ankapobeny dia mety ho fitsapana ho an'ireo mpandeha avy amin'ny atmosfera mafana kokoa, na izany aza, ny lohataona sy ny tapaky ny taona dia manome zavatra mety amin'ny andro mamiratra. Eny tokoa, na dia eo amin'ny halavan'ny fahavaratra aza dia misy foana ny oram-batravatra.
Ny toekarena UK
Angletera no toekarena fahadimy lehibe indrindra manerantany raha tombanan'ny GDP. Betsaka ny ex-pats voasintona ho an'ny firenena amin'ny karama avo sy amin'ny fomba fiainana mendrika. Na izany aza, ireo teboka ifantohana ireo dia tsy miparitaka amin'ny lafiny rehetra amin'ny toerana misy azy sy ny toeram-pizorana.
Ny firosoana amin'ny fitantanan-draharaha, ohatra, ny banky sy ny fiarovana - dia niroborobo nandritra ny taona maro, raha toa ka nihena ny orinasa mahazatra -, ohatra, ny famokarana. Satria maneho toerana maherin'ny 1,000,000 amin'ny toekarena anglisy, ny fanangonana ny fitantanan-draharaha any London sy ny atsimo atsinanana dia midika fa nipoaka ireo faritany ireo. Ny faritra samihafa dia tsy nahatsapa tombony ara-bola mitovy amin'izany amin'ny ankapobeny.
Ny mpitsoa-ponenana dia mety hahita karama ambonimbony kokoa any amin'ny faritra mandroso kokoa; Na izany aza, mila miady amin'ny fandaniana bebe kokoa koa izy ireo. Miasa amin'ny faritra any Angletera miasa azo antoka hanarenana ny harinkaren'izy ireo - sy ny famaritana ireo faritra an-tanàn-dehibe matotra eraky ny firenena - dia azo averina amin'ny fomba fiaina ambony noho ny fiainana ivelan'ny renivohitra ny ex-pats taloha.
Ny fifandanjana eo amin'ny fiainana
Ny britanika amin'ny ampahany betsaka dia miasa maharitra. Ara-dalàna raha mahita mpiara-miasa aminy mitondra ny asany any aminy amin'ny alina sy faran'ny herinandro. Miaraka amin'ny fisehoan'ny fanavaozana ny fifanoratana vaovao, ny ex-pats vitsivitsy dia mety hahita fa ianteherana izy ireo amin'ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny lehibeny. Faly, fifanakalozan-kevitra mitohy momba ny fiantraikan'izany eo amin'ny tombom-barotra ka nahatonga ny fikambanana maro hanandrana hanao ny mahay mandanjalanja eo amin'ny sehatry ny asa sy fiainana ho an'ny mpiasa.
Na dia kolontsaina lava be aza ny fotoana sy ny asa sarotra dia lehibe any Angletera, ny mpiasa kosa dia voaro amin'ny fisarahana sy fialan-tsiny tsy mitombina amin'ny alàlan'ny zon'ny zon'ny lalàna. Fikambanana marobe no manandrana mamela ny solontenany hanitsy ny orinasa sy ny fianakaviana - ampian'ny fialan-tsasatra tantanan'ny governemanta, ny karaman'ny reny / ny ray aman-dreny ary ny fanampiana amin'ny vidin-jaza. Ny UK dia manana hery miasa tsy mitovy kolotsaina samihafa.
Antsipiriany fototra momba ny Residence amin'ny Investment for UK
Fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK
Sarany fanampiny ho an'ny visa volamena ho an'ny UK
Tier-1 Innovator / Visa mpandraharaha & visa Tier-1 Investor
Fotoana fanodinana ho an'ny Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK
Tsy maintsy miaina 9 volana isan-taona any UK TR sy mandritra ny PR aorian'ny 5 taona (ILR)
Taorian'ny 6 taona manontolo miaraka amin'ny satan'ny ILR
Fahazoana zom-pirenena roa ho an'ny olom-pirenen'i UK
Safidy fampiasam-bola ho an'ny Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK
Visa Innovator / Mpandraharaha £ 50,000 1 an'ny tier-XNUMX amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny orinasa UK
Vola mitentina 2,000,000 Tier-1 mpamatsy vola amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny fifamatoran'ny Governemanta UK, na ny fizarana kapitalin'ny orinasa UK. Tsy azo atao ny mividy trano
Maninona no mandeha amin'ny Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK
Ny Fanjakana Mitambatra dia iray amin'ireo firenena matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao. Izy io dia heverina ho fiarahamonina misy kolontsaina marobe, iray amin'ireo serivisy fitsaboana maimaimpoana maimaimpoana indrindra eto an-tany, fotoam-pianarana ambony ary sehatra fitantanam-bola tokana. Ny programa momba ny toeram-ponenana volamena any UK dia manana ny dingana haingana indrindra amin'ireo programa azo ampitahaina amin'ny firenena G1: mazàna, ny fahazoan-dàlana dia mivoaka mandritra ny 8-6 volana. Ny fizotrany dia dinihina ihany koa amin'ny mason-tsivana mivantana, manamafy ny valiny andrasana. Fanampin'izany, ny satan'ny mponina tsy misy domicile dia manolotra tontolo hetra manintona ho an'ny olona mendrika ambony. Ny mpangataka sy ny fianakavian'izy ireo dia tokony hipetraka ao amin'ny firenena tsy latsaky ny 8% amin'ny fotoana aorian'ny namoahana ny fahazoan-dàlana.
Fifindra-monina any UK
Ny fangatahana mipetraka dia mety ahitana ny vadinao, zanaka latsaky ny 18 taona ary miankina amin'ny lafiny ara-bola ny ankizy mihoatra ny 18 taona. Aorian'ny fahazoana ny fahazoan-dàlana hipetraka dia tokony hipetraka any Angletera ny mpangataka rehetra ary omena alalana hipetraka ny ankizy raha toa ka mahazo ny fahazoan-dàlana avy amin'ny ray aman-dreny.
Fonenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any UK insite
Mba hahafenoany fepetra amin'ny programa honenana volamena, ny mpangataka dia tsy maintsy mametraka porofo manana fananana ara-bola ampy hamelomana ny tenany sy ny olona miankina aminy nefa tsy mandray asa.
Tokony hataonao fonenanao lehibe indrindra koa ny Fanjakana Mitambatra. Midika izany fa tsy afaka mandany mihoatra ny 180 andro isan-taona ivelan'i UK ianao. Tsy takiana ianao hanaporofo ny traikefa momba ny fitantanan-draharaha na ny fahaizana Anglisy amin'izao fotoana izao.
Mahazo visa Tier 1 aloha ianao mandritra ny 40 volana, ary tsy maintsy manao ny fampiasam-bola voafantina mandritra ny telo volana fidirana. Ny fahazoan-dàlana hipetraka, aorian'ny faran'ny fe-potoana voalohany 40 volana, dia hitarina mandritra ny roa taona raha toa ka manohy manome fahafaham-po ireo fangatahana mandritra ny fotoana ijanonanao ianao.
Afaka dimy taona dia honina maharitra ianao. Ho an'ity satan'asa ity dia tsy maintsy porofoinao ny fahalalana ny teny Anglisy, Welsh na Skotika Gaelic ary fahalalana mahazatra ny fiainana sy ny kolontsain'ny Fanjakana Mitambatra. Hanana fotoana ahafahana mangataka ny zom-pirenen'i Fanjakana Mitambatra ihany koa ianao.
Ny fangatahana ara-bola ho an'i UK
Mba hahazoana toerana onenana maharitra mandritra ny dimy taona ary avy eo dia honenana maharitra, ny mpangataka dia tokony hampiasa vola 2 tapitrisa GBP. Ny 75 isan-jaton'ny fampiasam-bola dia tsy maintsy miorina amin'ny fatoram-bolam-panjakana na fampiasam-bola ary 25 isan-jato no tokony hividianana fananana na hanaovana tahiry amin'ny banky.
Raha te hanana toeram-ponenana maharitra haingana ianao dia tsy maintsy mampiakatra ny habetsaky ny fampiasam-bola. Mampiasà GBP 5 tapitrisa, ho lasa mponina maharitra ao anatin'ny telo taona ianao, ary ho an'ny GBP 10 tapitrisa, roa taona monja ny fotoana hipetrahana maharitra. Mihatra amin'ny mpangataka lehibe ihany izany fa tsy amin'ireo miankina aminy. Ity farany dia hanana trano maharitra afaka dimy taona eo ambanin'ny safidy fampiasam-bola telo.
Fanohanana ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'ny UK
Ny ekipan'i ponenana avy amin'ny Agents Investment ho an'ny UK ary ponenana avy amin'ny Investment mpisolovava ho an'ny UK manome mpanjifa sy ny fianakaviany any Angletera miaraka amin'ny fanohanana ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any UK, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Angletera ary ny fahafaha-mifindra monina hafa firenena, 37 firenena.
Ny serivisinay dia tsy voafetra fotsiny amin'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any UK na Golden Visa avy any UK na ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any UK na pasipaoro faharoa, izahay koa dia manampy amin'ny fanararaotana fampiasam-bola tsara indrindra avy any UK, manome vahaolana feno raha te-hanangana orinasa iray ianao UK na offshore, loharanom-pahalalana mahaolona any UK sy maro hafa, izay misy ny drafitra ara-bola sy maro hafa.
Manampy ny mpanjifanay amin'ny vahaolana mifototra amin'ny zom-pirenena ao UK sy avy amin'ny fonenana faharoa.
Fanohanana manokana ho an'ny olom-pirenen'i UK:
Manome mora vidy izahay Fonenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i UK, amin'ny alàlan'ny takatry ny vidinay orinasan-dalàna momba ny fampiasam-bola sy ny fifindra-monina ho an'i UK, mpisolovava amin'ny fifindra-monina mora vidy ho an'ny UK, trano onenan-tsoa ataon'ny mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'ny UK, trano onenan'ireo mpisolovava mpamatsy vola ho an'ny UK ary orinasa mpanolotsaina fifindra-monina mora vidy ho an'ny UK
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any UK ka hatramin'ny firenena 37.
Visa volamena any UK mankany amin'ny firenena 37.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any UK ka hatramin'ny firenena 37.
Pasipaoro faharoa avy any UK mankany amin'ny firenena 37.
Fifindra-monina mifototra amin'ny orinasa avy any UK mankany amin'ny firenena 106.
Fonenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola avy any UK.
Fandaharana visa volamena any UK mankany amin'ny firenena 37.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola manomboka any UK ka hatramin'ny firenena 37.
Fandaharana pasipaoro faharoa avy any UK mankany amin'ny firenena 37.
Fandaharana fifindra-monina momba ny fifindra-monina avy any UK ka hatramin'ny firenena 106.
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK amin'ny alàlan'ny trano sy tany
Manome fanohanana izahay amin'ny famatsiam-bola amin'ny fananan-tany any UK miaraka amin'ny fomba fijery fa tokony hahazo tombony tsara ny mpanjifa any UK, isaky ny te-hiala amin'ny fampiasam-bola ataon'izy ireo izy ireo noho ny toeram-ponenan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'ny UK. Manana fifandraisana amina mpandrindra trano sy tany vitsivitsy faran'izay tsara eto Angletera izay manana rakitsoratra tsara izy ireo ary ny fananany dia any amin'ny toerana tsara any UK, mahazo ny valiny tsara indrindra.
Fandaharam-ponenana trano fonenana tsara indrindra ho an'ny UK miaraka amin'ny fampiasam-bola amin'ny trano any UK.
Mila fantarina - UK Residence by Investment
Ny toeram-ponenan'i Lawyer Investment ho an'ny UK dia hanome fanampiana amin'ny antontan-taratasy amin'ny antsipirihany momba ny Toeram-ponenanao mahomby amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK. Ny serivisy mahazatra momba ny Residence amin'ny Investment to UK dia misy:
Ny mpisolovava anay dia hahatakatra ny zavatra takinao amin'ny famindrana toerana avy any UK na UK, mifototra amin'ireto sosokevitra ireto
Izahay dia mitaky ny fahazotoana voalohany, mba hanomanana tatitra alohan'ny hanolorana Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'ny UK ho an'ny mpanjifa hahazoana fahazoan-dàlana Residence of UK ary hampihenana ny mety ho fandavana.
Miorina amin'ny tatitra momba ny fahazotoana miasa any UK, dia manolotra programa hafa mifandimby izahay mba hahombiazana bebe kokoa.
Mba hahafahantsika miroso amin'ny Residence amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'ny UK dia mila kopian'ny pasipaoro mpanjifa sy fianakaviana izahay.
Fandikana sy fanodinana ny antontan-taratasy Residence amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'ny UK. Ireo mpisolovava manokanay momba ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'ny UK sy visa volamena dia hanampy amin'ny famenoana ny endrika sy ny antontan-taratasy.
Vantany vao vonona ny antontan-taratasinao sy ny fianakavianao momba ny Resident amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'ny UK, dia hofenoinay tompon'andraikitra mifandraika amin'izany any UK.
Vantany vao ekena ny fangatahanao hitoetra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, dia mizara ny vaovao tsara aminao izahay ary manomboka miomana amin'ny fanampiana hafa.
Izahay dia tsy manohana na manome Residence amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola any UK amin'ireo olona voalaza etsy ambany na orinasa any UK:
ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i UK dia tsy atolotra an'ireo mpivarotra na mpaninjara fitaovam-piadiana sy bala na avy any Angletera.
ponenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'i UK dia tsy atolotra amin'ny fanaraha-maso ara-teknika any Angletera na fitsikilovana indostrialy ny programa fampiasam-bola ao na avy na ho any UK.
ponenana amin'ny alàlan'ny fakan-kevitra momba ny fampiasam-bola ho an'ny UK dia tsy atolotra ho an'ny hetsika tsy ara-dalàna na heloka bevava any UK.
ponenana amin'ny alàlan'ny fanampiana ara-bola ho an'ny UK dia tsy natao ho an'ny olona mifandraika amin'ny Genetic material any UK.
ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i UK dia tsy natao ho an'ny orinasa miady amin'ny fitaovam-piadiana biolojika na nokleary mampidi-doza any UK.
ponenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Ny fanohanana an'i UK dia tsy misy ho an'ny olona any UK mifandraika amin'ny varotra, fitehirizana any UK, na fitaterana taova olombelona.
ponenana amin'ny fampiasam-bola ho an'ny UK dia tsy natao ho an'ny maso ivoho tsy ara-dalàna.
ponenana serivisy fandaharana ho an'ny UK dia tsy natao ho an'ny antokom-pinoana sy ny fiantrana any Angletera.
ponenana amin'ny serivisy fampiasam-bola ao UK dia tsy omena ny olona manao sary vetaveta any UK.
Ny fonenanay mpisolovava any UK Aza manohana ny fandraharahana mivarotra zava-mahadomelina any UK.
“Fanamarihana lehibe : Ny MM Solutions INC dia mitaky fitandremana araka ny antonony mba hametrahana mialoha ireo antontan-taratasy AML ho an'ny mpanjifa any UK sy ny KYC saingy tsy manaiky andraikitra (ad) na inona na inona fandavana avy amin'ny manam-pahefana any UK izahay hahazoana fankatoavana ny fangatahana. ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK.
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK sy any amin'ny firenena hafa, miampy fanampiana maro hafa.
Manome fonenana tsara indrindra izahay amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny fampiasam-bola any UK amin'ny famatsiam-bola, fifindra-monina ary drafitra fananan-tany any UK.
Notohanan'ny Resident international amin'ny alàlan'ny traikefa amin'ny fampiasam-bola sy ny takian'ny lalàna any Angletera, manamboatra vahaolana tsara indrindra izahay.
Ny toeram-ponenanay amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'ny UK dia manome ny vidiny mora indrindra, miaraka amin'ny tahan'ny fahombiazana azo trandrahana tsara indrindra ho an'i UK.
Izahay dia nandany traikefa an-taonany maro momba ny trano roa ho an'ny UK manohana mpanjifa sy ny fianakavian'izy ireo ho an'ny UK.
Fonenana efa za-draharaha avy amin'ireo mpisolovava amin'ny fampiasam-bola ho an'ny UK sy ny mpiasan'ny lalàna ho an'ny UK manome fanampiana ny mpanjifa.
Manana mpisolovava sy agents tsara indrindra izahay ho an'ny fizotran'ny fikirakirana UK sy ny fampiharana izay manolo-tena amin'ny fahombiazanao.
Alohan'ny hipetrahanao any UK ary aorian'ny fankatoavana, ny mpikambana ao amin'ny ekipa zokinay dia ho eo eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha na fanohanana manokana an'i UK
Manana traikefa iraisam-pirenena amin'ny Residence izahay amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao UK, manampy ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao amin'ny serivisy tsara indrindra.
Raha sanatria, tsy nahomby ny toeram-ponenanao amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, dia misy firenena 36 hafa izay tompoinay, vonona miaraka amin'ny drafitra B izahay.
Kajy ny vidin'ny trano honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK
Mba hikajiana ny vidin'ny trano honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i UK azafady fenoy ny antsipiriany rehetra ao anatin'izany ny olona ao amin'ny fianakaviana sy ny taonany. Noho ny fahamaroan'ny mpanjifa any UK dia afaka manome serivisy tsara kokoa izahay amin'ny vidiny mirary. Ny kajy dia, ao anatin'izany ny vidin'ny trano onenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'ny UK sy ny fiampangana hafa.
Karazana visa ho ho an'ny UK
Fomba fiasa momba ny fahazoan-dàlana ho an'ny UK
Trano fonenana any UK
Fonenana maharitra any UK
Masoivoho sy Consulat any UK
Hetra any UK
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK sy serivisy hafa
Nitanisa serivisy vitsivitsy omena anay any Angletera izahay ho an'ny fitakiana tsy ho ela na ho avy.
Raha mikasa ny hifindra miaraka amin'ny fianakavianao any UK ianao amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola, izahay mpiara-miasa aminao ho an'ny UK, dia eo hanome serivisy hafa betsaka ary rahoviana ianao no hangataka any UK amin'ny vidiny mirary.
Ankoatry ny Residence amin'ny alàlan'ny consulting fampiasam-bola ho an'ny UK, dia manome serivisy, IT sy HR ho an'ny serivisy any UK koa izahay, izay tsy hitanao ambanin'ny elo iray nomen'ny mpanolotsaina hafa ho an'ny UK ka nahatonga anay fivarotana tokana ho an'ny UK sy firenena 106.
"Nanambola andrana nandritra ny taona maro izahay ary nanerana an'izao tontolo izao tao amin'ny firenena 106 mba hanampiana ny fianakaviana, ny olona ary ny fanandramana ho an'i UK hanatratra ny tanjony sy ny hetahetany."
Manohana ny lalan'ny mpanjifanay mihoatra ny trano misy anay izahay amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'ny UK miaraka amin'ny fanampian'ny mpisolovava anay, mpanolo-tsaina anay ary mpamatsy vola any Angletera sy iraisam-pirenena.
Orinasa any UK
Afaka manampy anao izahay misoratra anarana amin'ny orinasa any UK na Firenena an-dranomasina sy 106 (Ny vidin'ny fisoratana anarana amin'ny orinasa any UK dia mora kokoa amintsika.)
Kaonty Banky any UK
Izay mpampiasa vola mifindra monina any Angletera dia mila izany kaonty amin'ny banky manokana any UK ary kaontin'ny banky any UK, afaka manampy amin'ny kaonty any ivelany koa izahay.
Varavarana fandoavam-bola any UK
Ampidiro fa mila consulting any UK ianao, ho an'ny vahaolana fandoavam-bola nomerika any UK toy ny vavahady fandoavan-drazana na fintech any UK na vahaolana crypto, ampahafantaro anay.
Aorian'ny Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho UK raha mikasa ny manomboka orinasa amin'ny fividianana orinasa efa misy any UK ho an'ny fanombohana eo noho eo any UK.
HR Services any UK
ny orinasam-pandraisana mpiasa eto UK afaka manampy anao amin'ny fandraisana mpiasa haingana. Azonao atao koa post vacancies any UK maimaim-poana.
Nomera telefaona virtoaly ho an'ny UK
Rafitra telefaona orinasa any UK miaraka amin'ny isa virtoaly ho an'ny UK Firenena 102 sy tanàna 291.
Serivisy momba ny drafitra ara-bola any UK
Kaonty, fahazotoana miasa any UK ary be lavitra.
Adiresy birao virtoaly any UK
Orinasa manangana any UK
Aorian'ny Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, manangana orinasa ao UK.
Manome vahaolana IT voalaza etsy ambany izahay any UK
Famolavolana tranonkala any UK
Fampandrosoana ecommerce any UK
Fampandrosoana tranonkala any UK
Fampandrosoana Blockchain any UK
App Development any UK
Fampandrosoana rindrambaiko any UK
SEO any UK
Mpisolovava ho an'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK
Manome Residence ara-dalàna amin'ny vahaolana Investment ho an'ny UK izahay ary ny fahombiazan'ny mpanjifanay dia tena zava-dehibe, ho an'i UK, mpitarika izahay, ny orinasanay ho an'ny UK dia manana mpiasan'ny fifindra-monina tsara indrindra any UK ihany koa, manana ny lazany izahay amin'ny fanomezana traikefa mpanjifa tsara indrindra ho an'ny UK. vahaolana mazava momba ny fampiasam-bola stratejika ho an'ny olona UK sy ny fianakaviany. Ny toeram-ponenanay ekipa fampiasam-bola ho an'ny UK dia manome vahaolana namboarina ho fahombiazan'ny mpanjifa.
Ny olona ao amin'ny fianakavianao (zanaka, vady, ray aman-dreny) dia mahazo fahazoan-dàlana hipetraka any UK, rehefa ekena ny fahazoan-dàlana hipetrakao any UK.
Ny fahefan'ny mpisolovava any UK dia takiana amin'ny hetsika ara-dalàna rehetra momba anao amin'ny alàlan'ny Resident avy amin'ny mpisolovava mpamatsy vola any UK. Raha any UK ianao na mikasa ny hitsidika an'i UK, dia azonao atao ny mahazo etoana ny fahefanao mpisolovava.
Tsy mandoa vola fanampiny izahay hahazoana fahazoan-dàlana mpisolovava. Raha mikasa ny hanomboka fisoratana anarana ho an'ny orinasa any UK any lavitra ianao, ny fahefanao mpisolovava dia tokony ho ara-dalàna hampiasaina amin'ny faritanin'i UK. Miankina amin'ny firenena onenananao, tokony ho apetraka amin'ny apôstôly na ara-dalàna izany.
Fanontaniana napetraka matetika - Fonenan'ny Investment in UK
Inona ny famaritana ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK?
Ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, dia azo faritana ho, fahazoana honenana any UK amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny toekarena UK amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany toy ny, orinasa, trano, fifamatoran'ny governemanta, sns. tohanan'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'ny UK, amin'ny alàlan'ny trano fonenanay tsara indrindra ataon'ireo mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any UK, toeram-ponenana tsara indrindra ataon'ireo mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any UK ary toeram-ponenana tsara indrindra ataon'ny mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'ny UK, miasa amin'ny toeram-ponenana tsara indrindra ataon'ireo masoivohom-bola any UK, ary ny orinasa mpanadihady momba ny fifindra-monina. any UK.
Fonenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'ny UK | Fonenan'ny mpiasa mampiasa vola any UK | Fonenan'ny mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any UK | Fonenan'ny mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any UK | Fonenan'ny mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'ny UK
Inona ny famaritana ny zom-pirenena amin'ny fampiasam-bola any UK?
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, dia azo faritana ho, fahazoana zom-pirenen'i UK amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny toekarena UK amin'ny alàlan'ny fomba maro samihafa toy ny, orinasa, trano sy tany, fifamatoran'ny governemanta, sns any UK. Mangataha zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'ny UK tohanan'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'ny UK, amin'ny alàlan'ny zom-pirenenanay tsara indrindra ataon'ireo mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any UK, ny zom-pirenena tsara indrindra ataon'ireo mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any UK ary ny zom-pirenena tsara indrindra ataon'ireo mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'ny UK, miasa amin'ny zom-pirenena tsara indrindra ataon'ireo masoivohon'ny fampiasam-bola any UK, ary ny orinasa mpanadihady momba ny fifindra-monina tsara indrindra any UK.
Serivisy fifindra-monina ho an'ny mpampiasa vola any UK | Mpisolovava mpifindra monina mora vidy any UK | Mpisolovava amin'ny fifindra-monina mpampiasa vola any Angletera | Mpisolovava amin'ny fifindra-monina mpampiasa vola any Angletera | Mpanolo-tsaina momba ny fifindra-monina mpampiasa vola any UK | Orinasa mpahay lalàna mifehy ny fifindra-monina ho an'i UK
Inona ny famaritana ny pasipaoro faharoa any Angletera?
Pasipaoro faharoa any Angletera, azo faritana ho, fahazoana zom-pirenen'i UK amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny toekarena UK amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany toy ny, trano, asa, fifamatoran'ny governemanta, sns. serivisy pasipaoro faharoa ho an'ny UK, amin'ny alàlan'ny mpisolovava pasipaoro faharoa tsara indrindra eto UK, mpisolovava pasipaoro faharoa tsara indrindra any UK ary mpanolo-tsaina pasipaoro faharoa tsara indrindra ho an'ny UK, miasa amin'ny maso ivoho pasipaoro faharoa tsara indrindra any UK, ary orinasa mpanolotsaina mpifindra monina tsara indrindra any UK.
Serivisy pasipaoro faharoa ho an'ny UK | Mpanamboatra pasipaoro faharoa any Angletera | Mpisolovava pasipaoro faharoa any UK | Mpisolovava pasipaoro faharoa any Angletera | Mpanolo-tsaina pasipaoro faharoa ho an'ny UK
Inona ny famaritana ny visa volamena any UK?
Ny visa volamena any UK, dia azo faritana ho, fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any UK amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny toekarena UK amin'ny alàlan'ny fomba maro hafa toy ny, fatoram-panjakana, orinasa, trano sy tany sns. Mangataha visa volamena any UK, programa visa volamena ho an'ny UK tohanan'ny Serivisy visa volamena ho an'ny UK, amin'ny alàlan'ny mpisolovava visa volamena tsara indrindra eto UK, mpisolovava visa volamena tsara indrindra any UK ary mpanolo-tsaina visa volamena tsara indrindra ho an'i UK, miasa amin'ny masoivoho visa volamena tsara indrindra any UK, ary orinasa mpanolotsaina mpifindra monina tsara indrindra any UK.
Serivisy visa volamena ho an'ny UK | Agent visa volamena any UK | Mpisolovava visa volamena any UK | Mpisolovava visa volamena any UK | Mpanolo-tsaina visa volamena ho an'i UK
Inona ny fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Resident amin'ny fampiasam-bola any UK?
Fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Residence amin'ny fampiasam-bola any UK dia GBP 50,000.
Manome fanampiana ara-dalàna an'i UK ho an'ny Resident amin'ny fampiasam-bola ve ianao?
Eny, ny mpisolovava anay any UK sy ireo masoivohon'ny UK dia manome fanampiana ho an'ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK.
Mahalasa vola ve ny trano honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK?
Ny vidin'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK ary ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny vola ilaina amin'ny famatsiam-bola ho an'ny UK dia ho an'ny olona manana harato ambony, tsy miantoka afa-tsy ny saram-pakan-kevitra momba ny Residence amin'ny Investment to UK izahay, ary manome fanohanana hafa koa ho an'ny Residence amin'ny vahaolana Investment.
Iza ny mponina afaka mangataka Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK na visa ho an'ny mpampiasa vola any UK?
Ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola dia azo ampiasain'ny olom-pirenena amin'ny firenena rehetra saingy ohatra vitsy dia vitsy ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK avy any Azia, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany UK avy any Afrika, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany UK avy any Eropa, Residence amin'ny fampiasam-bola any UK avy any Amerika Atsimo, Fandraisana an-tanana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK avy any Malezia, Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK avy any Bangladesh, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK avy any Indonezia, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK avy any Sri Lanka, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK avy any Nepal, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any UK avy any India sy Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany UK avy any UAE.
Fonenana matihanina amin'ny alàlan'ny fitarihana fitarihana ho an'ny UK
Mangataha consultation maimaimpoana ho an'ny toeram-ponenanao amin'ny Investment to UK
Fepetra manan-danja amin'ny Residence amin'ny Investment for UK
Parlemantera Royaumea Tranon'ny Tompo
rohy Departemantan'ny fifindra-monina any UK , tompon'andraikitra amin'ny famolavolana politika hanafainganana ny fifindra-monina ao UK